ထမင်းတစ်နပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ထမင်းတစ်နပ်
Posted by ရွှေ ကြည် on May 4, 2013 in Creative Writing, Short Story | 60 comments
ခေါင်းပေါ်က ခေါင်းခုနဲ့ ဆံပင်ကြားမှာ ချွေးတွေဆိုတာ ရေလောင်းထားသလို စိုစိစိဖြစ်နေတာကို ကိုယ့်ဘာသာခံစားမိနေတယ်။
သားကလည်းကျုပ်လက်တဖက်ကိုတွဲထားရင်း ဟိုငေး၊ ဒီငေးနဲ့ ဒရွတ်ဆွဲလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။
တော်ပါသေးရဲ့ အောင်လံမြို့ဘက်အထွက်တဲ့ပြည်မြို့အစွန်ဘက်လမ်းမှာ လမ်းဘေးဝဲရာ မယ်ဇလီပင်တွေနဲ့မို့အရိပ်နည်းနည်းတော့ရနေသေးလို့။
ပြည်နည်းပညာကောလိပ်လို့ ရေးထားတဲ့ကျောင်းကိုကျော်ပြီး သစ်တောဝန်းတွေကိုရောက်လာပြီမို့
ကျောင်းသူအဆောင်တွေ လူနေအိမ်တွေနဲ့နီးလာပါပြီ။ လှမ်းတောင် မြင်နေရပြီလေ။
ကျုပ်တို့သားအမိကတော့နေပူကြောက်နေလို့မရပါဘူး စီးကျလာတဲ့ချွေးကို လက်ခုံနဲ့သုတ်ရင်း သားကိုငုံ့ကြည့်လိုက်မိတယ်။
ဟုတ်ပ ဗိုက်ထဲက တကျုတ်ကျုတ်မြည်နေတာကြာပေါ့။
စားရမယ်သားရဲ့ ခနလေးစောင့်နော် လို့ပြောသာပြောလိုက်ရတာ ပိုက်ဆံကအကြွေလေး ၅၀ တန်နှစ်ရွက်ပဲပါတယ်။
သက်ပြင်းမောကိုမသိမသာမှုတ်ထုတ်ရင်း တံမြက်စည်းတစ်ချောင်းလောက်တော့ရောင်းရပါစေလို့ စိတ်ထဲကနေဆုတောင်းနေမိတယ်။
သစ်တောဝန်းကျော်တော့ ကားလမ်းဘေးကနေ အောက်ဖက်လမ်းကလေးကိုဆင်းလျှောက်လာခဲ့တယ်။
ဟော အိမ်တွေ ဆိုင်တွေတွေ့ပြီ “တံမြက်စည်း” လို့ အော်ရင်း ခေါ်သံကိုနားစွင့်ထားမိတယ်။
ခေါ်သံမကြားရပါလား တအိမ်လောက်ခေါ်ပါစေ။ ခေါ်သံကိုသာမျှော်လင့်နေရတာခေါ်တိုင်းလည်းဝယ်တာမဟုတ်။
အဆောင်ကြီးကြီးတခုရှေ့ရောက်တော့ခပ်ကြာကြာလေးရပ်ပြီး အခါခါအော်နေမိတယ်။ ဗိုက်ဆာလှပြီ။
ခေါ်သံမကြားတော့ဆက်လျှောက်လာရင်း ထမင်းဆိုင်သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးတခုရှေ့က မယ်ဇလီပင်အောက်မှာ
တံမြက်စည်း အစည်းကိုချ သားကို ထိုင်ခုံပေါ်တင်ပေးရင်း ခေါင်းခုကိုဖြည်ပြီး ချွေးသုတ်နေမိတယ်။
ချွေးထွက်များလို့ထင့် ရေငတ်လာသလိုပဲ။ အနီးအနားမျက်လုံးဝေ့ရှာကြည့်မိတယ်။
ကံကောင်းချင်တော့ ရေအိုးစင်လေးတွေ့တယ် ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေတော် ကိုယ်တိုင်လည်းခပ်သောက်
သားကလေ ထမင်းဆိုင်ထဲက ကျောင်းသူအရွယ်ကောင်မလေးတွေထမင်းစားနေတာကိုငေးကြည့်နေတယ်လေ။
ဝေ့၀ဲလာတဲ့မျက်ရည်ကို မျက်တောင်ခတ်လိုက်ရင်း သားကိုရေသောက်ဖို့လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။
သားကထပ်ပြောတယ် “ဗိုက်ဆာတယ် မေမေ” တဲ့။ သိပါတယ်သားရယ် အမေလည်းဆာနေတာပေါ့။
အခုအချိန်များ တံမြက်စည်းတစ်ချောင်းလောက်ရောင်းရရင် သားကို မုန့်ဟင်းခါးလေးဝယ်ကျွေးလိုက်မယ်လို့တွေးရင်း ငေးနေမိတယ်။
အဲဒိအချိန်ကောင်မလေးနှစ်ယောက် ဆိုင်ထဲကထွက်လာတယ် ပြီးတော့ ကျုပ်တို့ဆီကိုလျှောက်လာနေတယ်။
ကျုပ် ဖျတ်ကနဲဝမ်းသာသွားပြီး တံမြက်စည်းလာဝယ်တာများလား လို့ မရဲတရဲ တွေးမိတယ်။
ကျုပ်တွေးတာမှန်တယ်တော့ သူတို့တံမြက်စည်းလာဝယ်တာ ညနေ ဘုရားမှာ တံမြက်စည်းလှည်းမလို့ဆိုပဲ။
တံမြက်စည်း သုံးချောင်းဝယ်မယ်တဲ့။ အောင်မလေး ကျုပ်ဝမ်းသာလိုက်တာကွယ်။ ကျုပ်လည်း ကောင်းတာလေးတွေရွေးပေးလိုက်တယ်။
မယ်မင်းကြီးမလေးတွေ ကျန်းမာပါစေတော်။ ဈေးတောင်မဆစ်ဘူးတော့ သုံးချောင်းဝယ်သွားတယ်။
ကျုပ်သားလက်ကိုဆွဲလိုက်တယ် တံမြက်စည်း စည်းကို လက်ကပိုက်ပြီး
“လာ သား ထမင်းသွားစားကြမယ်” ရဲရဲကြီးပြောလိုက်ပြီး ဟိုး ရှေ့ကမြင်နေရတဲ့ လိုင်းကားဂိတ်လေးနားက ထမင်းဆိုင်သေးသေးလေးဆီကို
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ( ဓါတ်ပုံရှာပေးသော မောင်ငယ်လေး အံစာတုန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် )
ဦးကျောက် ဘဝဆိုတာကို နားလည်ပေမည့် ဇာတ်အရမ်းနာတဲ့…
ဆင်းရဲတာတို့ အဆင်မပြေတာတို့ဆိုရင် ဖတ်ပြီးစိတ်ရှုပ်လို့ သိပ်မဖတ်ဘူး…
ဟီး… ဈေးမဆစ်ပဲဝယ်သွားတဲ့ သူငယ်မသုံးယောက် လင်ကောင်းသားကောင်းရပါစေဗျာ…
(ဟီ ဟိ အဲ့အထဲ ရွှေကြည်ပါ ပါသလားမသိ)
အူးကျောက်ရေ အတူတူပဲ ဇာတ်လမ်းကြည့်ရင်တောင်အရမ်းဇာတ်နာရင် မကြည့်ဘူး။
အဘ လည်း ဦးကျောက်လိုပဲ ၊ ဆင်းရဲ ဇတ်နာတာတွေ သိပ် မကြည့် / မဖတ်ဘူး ။
ကြည့်မိ ဖတ်မိ ရင် ၊
၁ ။ ကိုယ်ပါလိုက် စိတ်ဆင်းရဲ လို့ ။
အဘိဓမ္မာ က ပြောတာကတော့
၂ ။ အဲဒီ ဆင်းရဲ ဇတ်နာတာတွေ မြင်ရတာ ၊
အရင် ဘဝ က အကုသိုလ်ကြောင့် ဖြစ်တယ်တဲ့ ။
၃ ။ အဲဒီ ဆင်းရဲ ဇတ်နာတာတွေ မြင်ရရင် ဒီ ဘဝ မှာလည်း ၊
အကုသိုလ် ထပ်ပွားတယ်တဲ့ ။
ဒါကြောင့် ဆင်းရဲ ဇတ်နာတာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်တယ် ။
( အင်း ၊ အရမ်း ဆင်းရဲ လွန်းလို့ အဝတ်ပါ မကပ်တော့တဲ့ ၊
သာမီးလေးတွေကတော့ ချွင်းချက် ပေါ့လေ ၊ ဟီ ဟိ ၊ ငယ်တုန်းက ပြောပါတယ် ။
အခုတော့ ၊ တရားသဘောနှင့်ပဲ ကြည့်ပါတော့တယ် ၊ အနိတ်စ ၊ အနိတ်စ )
အဘရေ တရားသဘော တရားသဘော :harr:
အော် … ထမင်းတတစ်နပ် … ထမင်းတစ်နပ် …
အခု ဒီထဲက ဈေးသည် သားအမိရဲ့ ဘဝဟာ
တကယ်ကို သနားစရာပါပဲ ….
နောက်ဆုံးမှ ဝမ်းသာသွားမိတယ် …
ဟို တံမျက်စည်း ဝယ်ပေးသွားတဲ့ တောင်မလေးတွကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ဒယ် …
ကျေးဇူးတင်ဒဲ့ အနေနဲ့ …
ဟောဒီ ကိုကိုအံ က အနစ်နာခံပြီး ဂျစ်ပေးလိုက်မယ် …
ဘာမွှလည်း ဆိုင်ဝူး …
ဟုတ်ပ ငါ့မောင် ထမင်းတနပ်တန်ဖိုးဟာ နွမ်းပါးသူတွေအတွက် သိပ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။
ကိုကိုအံက တော့ ရက်ရောချက် ဂျစ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲ ယောင်းမတော့ရတော့မယ်ထင်တယ်
နေပူတာလည်း ဒို့မမှု့နိုင်၊ မိုးရွာတာလည်း ဒို့မမှု့နိုင်
တစ်ဝမ်းတစ်ခါး အတွက် ရှာရဖွေရ လုပ်ကိုင်ရလို့
ငြီးတွားနေတဲ့သူတွေရဲ့ ရုန်းကန်နေကြတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကလည်း ရှု့မျှော်လို့မဆုံးသလို။
အစီအရီ ပြေးလွှားကာ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ မြို့ပြတွေရဲ့ ကားမျိုးစုံစီတန်းသွားလာမြင်ကွင်းကလည်း ရှုမျှော်လို့ မဆုံးပါ။
အဲဒီမြင်ကွင်းတွေ တစ်လှည့်စီတွေ့နေရတဲ့ ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ ဖြစ်စမြဲပါလို့………။
လေးခင်ခရေ မှန်ပါ့ မှန်ပါ့ ပြည်မှာတုန်းကထက် ရန်ကုန်ရောက်တော့ ဘ၀ပိုစုံတဲ့ရှုခင်းတွေတွေ့ရတာ ရသစုံပါပဲရှင်။
တစ်ပုဒ်ဆို တစ်ပုဒ် ဆိုသလောက် ရသမြောက်အောင် ရေးနိုင်ပါပေတယ်။
ဇာတ်ကောင်နဲ့အတူ ရင်မောစွာ စီးမျောလိုက်ပါရင်း…..
နောင် ဈေးအတင်းဆစ်တတ်တဲ့ ဗီဇကို ပြင်ရမယ်။ :harr:
ချစ်မမရေ ရွှေကြည့်ရဲ့ လက်ရာကိုအားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ မမရယ်
အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါအရ ဆစ်သင့်ရင်လည်းဆစ်ရပေမပေါ့ ချစ်မမရေ
ရွှေကျီလေး.. ကျလိ.. ကျလိ.. အများအားဖြင့်တော့ လမ်းလှည့်ရောင်းတဲ့ ဈေးသည်တွေကို
မ၀ယ်ပေးတတ်ပါဘူး.. ကိုယ့်စိတ်က သနားတတ်တော့…
ခေါ်ဝယ်ရင် မတန်တဆဈေးမှန်းသိလဲ အားနာတာကော
သနားတာကော ပေါင်းပြီး ၀ယ်ဖြစ်သွားကော…။
သနားဂရုဏာစိတ်ကို အသုံးချတတ်တဲ့ လူဒွေကခပ်များများဆိုတော့..
ထမင်းခဏခဏငတ်ဖူးတဲ့ ကိုရင် အသိဆုံးဖြစ်ပါကြောင်း…။
ကိုရင်စည်ပြောတာလည်းမှန်တယ်ရှင့် ဒါပေမယ့် ရွှေကြည်ကလူကိုကြည့်သေးတယ်
တချို့ကရိုးသားမှန်းသိသာတယ် သူတောင်းစား(သန်သန်မာမာနဲ့တောင်းတတ်သူ) ကိုပေးမယ့်အစား
သူတောင်းစားတောင် သီချင်းလေးများဆိုပြပြီးတောင်းနေရင် ပေးပြီးသားပဲ တီးလုံးလေးတွေများတီးတတ်ချက်တော် နားထောင်ကောင်းတယ်
အရေးအသားအားပေးတယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါ၏ ကိုရင်ရေ လိုနေတာလေးတွေလည်းဝေဖန်ပါဗျ။
အရင်ကလဲ ရှိ အခုလဲ ရှိ နောင်လဲ ရှိဦးမှာပေါ့
ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ အလုပ်လုပ်ရင် လုပ်သလောကို တန်ရာတန်ကြေးရနိုင်အောင် အင်းးးးးးး ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့။
အဲလို သူများတွေ ထမင်းတစ်နပ် ရှာစားရတာ ခက်ခဲတာ တွေ့လေ……
ထမင်း ငတ်မှာ ကြောက်လေ……………………………………………….
အစ်မဇာရေ ထမင်းတော့ပုံမှန်ပဲစားပါအစ်မရယ် ရွှေကြည်တောင်ဝိတ်လျှော့နေလို့ လျှော့စားနေတယ် :harr:
ကြည်လေးရေ သာဓု သာဓု သာဓု ပါကွယ်
အူးပေ ကြည်လေးလို့ ဘာလို့တပ်အပ်ပြောရတာတုန်း
နတ်သမီးလိုမချောချင်ပါဘူး သိကြားမင်းကြောက်လိုပ :harr:
အို…….. ငါလေ သိပ်လွမ်းတာပဲကွယ်….။
(ရေအိုးစင် ယဉ်ကျေးမှု ဗမာပြည်မှာ ကွယ်ပျောက်စပြုနေပါပြီ ရေသန့်ဘူး ကောင်းမှုနဲ့)
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်ကတော့ရေသန်ဗူး ပေါ်နေပြီဆိုပေမယ့် ရေအိုးစင်လေးတွေရှိနေသေးတယ်ဗျ
ကိုနေ ရေ ကျေးဇူးအကြီးကြီးပါနော့
တိုတိုလေးနဲ့ထိထိမိမိ ရေးသွားလိုက်တာ
ခင် ခင် ထူးရဲ့ ဝတ္တု တိုတွေ ကို တောင်
အလက်ဆင်းရေ တကယ်ကြီးလားဟ နည်းနည်းလောက်ဝေဖန်ပါဟ ကိုယ့်အစ်မကို ပစ်မထားပါနဲ့ မြှောက်ပေးတာတကယ်ထင်ပြီး ဘ၀င်မမြင့်ပါရစေနဲ့
သူတို့တံမြက်စည်းလာဝယ်တာ ညနေ ဘုရားမှာ တံမြက်စည်းလှည်းမလို့ဆိုပဲ။
သူကြီးရေ သူကြီးလာကိုဆိုလိုလည်းဆိုတာထက် ရွှေကြည့်ရဲ့ အဲဒိအချိန်က ခံစားချက်ကတော့
၀ယ်လိုက်ရင် သူတို့ပိုက်ဆံရမယ် သူတို့အတွက် အဆင်ပြေမယ် ကိုယ်ကလည်း ဒီလောက်မလိုအပ်တော့
အနားကစေတီမှာ တံမြက်စည်းလည်းလှူမယ် သန့်ရှင်းရေးလည်းလုပ် လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးပဲရှိတာမို့…
ဘုရားမှာမလှည်းပဲ.. မူလတန်းကလေးကျောင်းမှာသွားလှည်းရင်.. လက်တွေ့သိသာတဲ့ကုသိုလ်ရမယ်လို့… ပြော..ပြော… ချင်တာပါ…။
အဲလောက်အချိန်မရှိရင်လည်း.. ကိုယ့်အိမ်ရှေ့ကိုသာ.. လှည်း..
ဒီလောက်ညစ်ပါတ်နေကြတာလေ..။ စည်ပင်ချည်းလွှဲချနေလို့… မဖြစ်တော့တာပဲ..။
အတွေးအခေါ်တွေထဲမှာကို… ယာစကာမျိုးဖြစ်ပြီး.. တညိုးညိုးနဲ့.. လိုတာထက်ပိုကုန်ပြီ…
အင်း.. နှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာ.. လို့… ပြော.. ပြော.. ပြောချင်တာ…။
အာ သူကြီး က လဲ လဲ လဲ လဲ လဲ လဲ လဲ လဲ
မူလတန်းကျောင်းမှာက တံမြက်စည်းရှိတယ် ကျောင်းအတွက်သန့်ရှင်းရေးပါရှိပါတယ် မြို့ကြီးကိုဗျ ပေါလို့
နယ်ကကျောင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ လိုအပ်ရင်လည်းလုပ်ပေးတာပဲ ရွှေကြည့်အစ်မဆို တောကျောင်းက
မူလတန်းပြဆရာမ လိုအပ်တယ်ဆိုရင် လုပ်ပေးတာပဲ စာအုပ်က အစ သူတို့ရွာကလူတွေကနွမ်းပါးလို့လေ။
အိမ်ရှေ့ကလည်းလှည်းစရာမလိုအောင် စည်ပင်ကလှည်းတယ်ဗျ။ လိုလာရင်လည်း အတူတူ အဆောင်သူတွေလှည်းကြတာပဲ အိမ်ရှေ့လှည်းတဲ့တံမြက်စည်းက အုန်းတံမြက်စည်းဗျ။ မြေကြီးချလှည်းတာ တခါ တခါ သူကြီးဆိုလိုရင်းကိုလိုက်မမှီဘူးဗျာ
ဒီမိုကရေစီဖတ်စာ မှာ လူတစ်ဦးသည် အခြားသူများကို မထိခိုက်သ၍ သူ့ကြိုက်ရာလုပ်ခွင့်ရှိသည်။
ဘုရားမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာ ဘယ်သူ့ကို ထိခိုက်လို့လဲ။
မရွှေကြည်က ပြည် နည်းပညာကောလိပ်မှာ တက်ခဲ့ဘူးသလားခင်ဗျ..
ဘယ်နှစ်ခုနှစ် ..ဘယ်မေဂျာကလည်း မသိဘူး… ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းတက်
တုန်းကတော့ ပိုက်ဆံ ၁၀၀ ဆိုရင် ထမင်းစားလို့တယ်..။
ကိုမောင်ဘလှိုင်ရေ ရွှေကြည်က ပြည်နည်းပညာမှာ ၂၀၀၁ ကနေ ၂၀၀၅ အထိတက်ခဲ့ပါတယ်။
ရွှေကြည်တို့ခေတ်တုန်းကတော့ ထမင်းကိုဟင်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး ၃၀၀ တော့ကျမယ်ထင်တယ်။
ရေးနေရင်းစဉ်းစားတာ သေချာမမှတ်မိတော့လို့ နောက်ကနေ ခြေစောင့်လက်စောင့် ထားရတယ် လို့ထည့်ရေးပေးလိုက်တာပါ။ ကြိုကာထားတာလေ :harr: ကိုမောင်ဘလှိုင်ကလည်းပြည်နည်းပညာကလား
တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် အမှတ်မှားဘူးဆိုရင် ရွှေတောင်ကလို့ထင်ပါတယ် ဟုတ်လားတော့မသိ
အဲဗျ..ဒါဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တစ်ကျောင်းတည်းပေါ့…နောက်တော့ လက်ခုပ်ပင်ကို
ကျောင်းပြောင်းရတယ်လေ…ကျွန်တော် ပြည်သားပါ။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်လောက်ကဆို
လက်ဘက်ရည် ရိုးရိုးတစ်ခွက်ဟာ ၁၅ကျပ်ပေါ့…ထမင်းဖြူတစ်ပွဲဟာ ၁၅ကျပ် ၂၀
ထက် မပိုလောက်ဘူး..။ ဆီကျန် ရေကျန် ကြက်သားတုံးသေးသေးလေး နှစ်တုံး
လောက်ပါတဲ့ ဟင်းတစ်ပွဲဟာ ၅၀ကျပ် လောက်ပါပဲ..။ အခုဇာတ်လမ်းထဲပါတဲ့
ဘုရားကြီးရှေ့က ထမင်းဆိုင်တော့ တစ်ခါလား နှစ်ခါလား စားဖူးပါရဲ့..။အိုင်တီ
မေဂျာက မောင်သန်းထိုက် ကို သိရင် သူနဲ့ တတွဲတွဲ နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို
သတိပြုမိမှာပါ။ ဒီကောင်က ကျောင်းမှာ မသိသူ မရှိသလောက်ကိုး။
ကိုမောင်ဘလှိုင်ရေ သန်းထိုက်ကိုသိပါတယ် ဒါဆို ကိုမောင်ဘလှိုင်ကိုလည်းလူမြင်ရင်တော့သိလောက်ပါတယ်
မနိုရေ ခုလိုအားပေးလို့ ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်မိပါကြောင်း ဆာလောင်မှုဒါဏ်ကို ရွှေကြည်လည်းခံစားဖူးပါရဲ့
ကျုပ်တော့ သဘောကျတယ်..သန်သန်စွမ်းစွမ်းကြီးနဲ့ တောင်းစားတာ…လိမ်စားတာ
“ဟော အိမ်တွေ ဆိုင်တွေတွေ့ပြီ “တံမြက်စည်း” လို့ အော်ရင်း ခေါ်သံကိုနားစွင့်ထားမိတယ်။
အူးကြိုက်မီးရေ ရွှေကြည်ဝမ်းသာမိပါကြောင်း အူးကြိုက်မီးနဲ့ တသဘောတည်းဖြစ်ပါကြောင်းးး :hee:
ဒီအဖြစ်အပျက်လေးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်လောက်ကပါ။
ငါ့ဖေကြီးလဲ အဲလိုပဲ ခံစားခဲ့ရမှာ…
ရသမြောက်ပြီးအကျိုးရှိတဲ့ပိုစ်ကလေးပါပဲရွှေကြည်ရေ။ ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုး ကိုယ်နဲ့ခင်တဲ့သူတယောက်က ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးတယ်။ ထောင်ကထွက်လာတာလားမသိတဲ့သားအမိ ၂ယောက် ၊ အမေက လက်ကိုအတင်းဆွဲ သားကအတင်းရုန်းပြီး မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်နားမှာစားချင်လို့ သွားငေး လိုက်အမေက အတင်းဆွဲခေါ်လိုက်နဲ့ ဗိုက်တော်တော်ဆာနေပုံရတယ်။ ဒါကိုတွေ့တဲ့မိတ်ဆွေက သနားလို့ခေါ်ပြီး ထမင်းကြွေးတာ အငမ်းမရစားလိုက်ကြတာ သနားဖို့ကောင်းတယ်။ အဲဒီစေတနာရဲ့
အကျိုးကြောင့်ထင်ပါရဲ့ သိန်း ၅၀၀ ၊ ၁၀၀၀ ၊ ၁၅၀၀ ထီဆုကြီးတွေ ပေါက်ဖူးတယ်။
နေချားရေ ကျေးဇူးအကြီးကြီးတင်ပါရစေ နော်
တသောင်းဆုတော့ထီတွတ်ဝင်လို့ ရဘူးတယ် ကျောင်းပြီးကာနီးပေါ့ :harr:
ဟင့်… သများလည်း အဲလို ဈေးလိုက်ရောင်းနေတာမြင်ရင် သိပ်သနားတာ… နေပူကြီးထဲမှာဆိုပြီးတော့….
နောက်ခါကျရင် တတ်နိုင်သလောက် ၀ယ်လိုက်ဦးမယ်…နော်….
မမဂျီး.. ရေးထားတာ ရှယ်ပဲ.. တကယ်ပြောတာ… LIKE!!!!!
အမွန်ရေ ကျေးဇူးတင်ပါ၏ မမဂျီးဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည် :harr:
လောကကို တစ်ဖက်တစ်လမ်း အလှဆင်ပေးတဲ့ မိန်းကလေး ကို ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာတွေ့ လိုက်တယ်။ :-)
ချစ်ရတဲ့ အရီးရေ လာအားပေးလို့ ၀မ်းသာလိုက်တာ
အစားတစ်လုတ်အတွက် အရမ်းခက်ခဲအောင်ရှာနေရတဲ့သူတွေကိုမြင်တော့.. စားချင်တာကို တစ်ဝတစ်ပြဲစား.. စားလို့ ဝိတ်တက်လာရင် ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး ပိန်ဆေးပြန်သောက်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို..စိတ်ပျက်မိတယ်.
ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် သူ့ဘ၀နဲ့သူပါကွယ် ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ
ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပေါ့ သူတို့ဘ၀ကိုစာနာလို့ နိုင်သလောက်ဖေးကူတာကလွဲပြီးဘာမှမတတ်နိုင်တာပဲနော်။
တိုတိုလေးနဲ့ရင်ထဲထိပါတယ်။ အဲလို အထမ်းခေါင်းရွက်ဈေးသည်တွေအပေါ်အမြင်စောင်းခဲ့သမျှ အခုပြင် ရ တော့မယ်ထင်ပါ့။
အစ်မသဲရေ အားပေးတာ ကျေးကျေးပါ။
ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို အမှတ်တမဲ့ တွေ့နေတာတော့ ကြာပြိ.. အခုမှ ကွန်မန်းထဲမှာ သူများမန်းတာ မြင်မှ ဘာလဲလို့ ၀င်ကြည့်တာ.. အရေးကောင်းပါတယ်။ စိတ်ကူးကောင်းပါတယ်။
ဆူး အမေ ဆိုလဲ မြင်တတ်တယ်.. အဘိုးကြီးတွေ အဘွားကြီးတွေ ဘာမှ အဖိုးမကြီးတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ထိုင်ရောင်းနေတာ မြင်ရင် အားပေးရင်းနဲ့ ပိုတဲ့ဟာ ပြန်မအမ်းနဲ့ ယူလိုက်ဆိုပြီး လုပ်တတ်တယ်။ အဘိုးကြီး အဘွားကြီးတွေ ၀မ်းသာလို့ ဆုတွေ ဘာတွေ ပေးလို့.. ကိုယ်တိုင်တော့ သတိမထားမိလို့လား မသိဘူး.. တခါမှ အဲ့လို မတွေ့မိဘူး။
သူငယ်ချင်းလင်မယားကလည်း စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေ တပတ် ကို ၂ရက် လင်မယား ၂ယောက် မွေးနေ့ မှာ သူတို့ စားတဲ့ ညနေစာ အတိုင်း(သူတို့ စားတဲ့ ဟင်း ထမင်း) ၃ဗူး ထုတ်ပြီး ကျွေးတယ်ပြောတယ်.. အားကျမိပါတယ်။ ကိုယ်ပဲ လောကကြီး ကို သေချာ မကြည့်မိတာလား မသိပါဘူး။ ကြုံကို မကြုံကြိုက်ဘူး။
အလှူအတန်း ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လောက်မှ မဟုတ်ပဲ.. နီးစပ်ရာ တတ်နိုင်တဲ့ အပိုင်းက လှူတာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ကတော့ ညံ့လျက်ပါပဲ။
ရွာတော်ရှင် ကိုယ်တိုင်ကြွရောက်ချီးမြှင့်တာ ၀မ်းသာလိုက်တာ
အစ်မဆူးရေ အစ်မကမညံ့ပါဘူး အစ်မလည်းနိုင်သလောက်လုပ်ပေးနေတာပဲလေ
ကျော်သွားမိတယ်။ခုမှ သူများညွှန်လို့ ပြန်လှည့်လာတာ။
အဲသလို သနားလို့ ၀ယ်မိတာတွေ မနည်းတော့ဘူး။
သူတော်ကောင်းပိုက်ဆံ ဆိုပြီး ဖတ်ဖတ်ဖတ် ရိုက်ရင် ပီတိကိုဖြစ်လို့။
ဒါလေးကုန်ရင် အိမ်ပြန်ချင်လို့ အကုန်ယူသွားပေးပါဆိုရင်လည်း ၀ယ်လိုက်မိတာပဲ။
အိမ်ကျတော့မှ အနာတွေ အပုပ်တွေပါရင် ဆူခံရဖူးတယ်။
အခု အသက်ကြီးလာလို့ ဆူမယ့်သူမရှိတော့ပေမယ့် ကိုယ့်ဖာသာ မလုံဘူးပေါ့။
ဒါပေမယ့် နောင်တွေ့ရင်လည်း သနားပြီး ၀ယ်အုံးမှာပဲ။
ရေးထားတာလေးက တကယ်ထိပါတယ် မမရွှေကြည်ရေ…
အလှူလေးအတွက်လည်း အခုထိ ပြန်တွေး ကြည့်မိတိုင်း ပီတိ ဖြစ်နေတုန်းပဲ မဟုတ်လားဟင်